Ukhenketho kufuneka lubandakanywe kwiingxoxo zokufumana isitofu sokugonya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Ukhenketho kufuneka lubandakanywe kwiingxoxo zokufumana isitofu sokugonya
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba Eziphulayo Eswatini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Usihlalo we-ATB Mnu Cuthbert Ncube kwiProjekthi yeBhodi yezoKhenketho yase-Afrika iThemba
Ngelixa abemi baseYurophu nakuMntla Melika benendawo yokugonya eyaneleyo, iAfrika, iCaribbean kunye nezinye iindawo eziphambili zokhenketho zisemva kwehlabathi liphela. Oku kunqanda uqoqosho ukuba lusebenze, ngakumbi icandelo lokhenketho nokhenketho.
Cuthbert Ncube, usihlalo we IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika ebenyanzelisa ukonyusa iyeza le-COVID-19 e-Afrika. Uthi uKhenketho lushiywe ngaphandle kwezi ngxoxo.
Ukhenketho lweHlabathik Usihlalo uJuergen Steinmetz ubongoza ukhenketho ukuba lube yinxalenye yeengxoxo. Ukhenketho licandelo lezoqoqosho elibalulekileyo kumazwe amaninzi kwaye alunakho ukusebenza ngaphandle koochwephesha kwiingcali kunye neendwendwe ukuba zigonywe.
Iintloko ze-International Monetary Fund (IMF), i-World Bank, i-World Health Organisation (i-WHO), kunye ne-World Trade Organisation (WTO) zidibene neenkokheli ze-African Vaccine Acquisition Trust (i-AVAT), i-Afrika CDC, i-Gavi kunye ne-UNICEF. ukukhawulezisa ngokukhawuleza izitofu zokugonya kumazwe anengeniso esezantsi kunye nephakathi, ngakumbi e-Afrika.
“La mazwe, uninzi lwawo ase-Afrika, awanakho ukufikelela kwisitofu esoneleyo ukuhlangabezana neenjongo zehlabathi ze-10 yepesenti yokugubungela onke amazwe ngoSeptemba kunye neepesenti ezingama-40 ngokuphela kowama-2021, kungasathethwa ke ngeenjongo ze-African Union ngama-70 epesenti ngowama-2022. ”, Atsho amagosa e-UN.
Ingxaki yokungalingani kwamachiza iqhuba "ukwahluka okuyingozi" kumanqanaba okusinda e-COVID-19 nakuqoqosho lwehlabathi, iintloko ze-arhente zatsho, zivakalisa umbulelo "ngomsebenzi obalulekileyo" we-AVAT kunye ne-COVAX ukuzama ukulungisa "imeko engamkelekanga" .
Nangona kunjalo, balumkisile, "ukuhlangabezana ngokukuko nokunqongophala kokunikezelwa kwamachiza kumazwe aphantsi naphantsi, kunye nokwenza ukuba i-AVAT kunye ne-COVAX zenze intsebenziswano engxamisekileyo kubavelisi bamachiza, amazwe avelisa isitofu, kunye namazwe asele ephumelele. amazinga aphezulu okugonya ”.
Ukufikelela ekujoliswe kuko
Ukuqinisekisa ukuba onke amazwe afezekisa iinjongo zelizwe ubuncinci zeepesenti ezili-10 ngoSeptemba, kunye neepesenti ezingama-40 ngokuphela konyaka, amagosa aphezulu e-UN acele amazwe athe afumana imiqolo ephezulu yezitofu ukuba "batshintshe iishedyuli zokuhanjiswa kwexesha. nge COVAX kunye neAVAT ”.
Bacebise abavelisi bamachiza ukuba "babeke phambili ngokukhawuleza kwaye bazalisekise" iikhontrakthi zabo kwi-COVAX kunye ne-AVAT, kunye nokubonelela rhoqo, ngokucacileyo uqikelelo lonikezelo.
Ngapha koko, ii-arhente ze-UN ziye zacela amazwe angama-G7 ahambele phambili kwimizi-mveliso nawo onke amazwe abelana ngeedosi ukuba "azalisekise izithembiso zawo ngokungxamisekileyo" ngokubonakala okuphuculweyo kwemibhobho, ubomi beshelufri yemveliso, kunye nenkxaso yokubonelela ngoncedo-njengoko kungafakwanga iipesenti ezilishumi kwipesenti eziphantse ezingama-10 ezizibophelelayo. kusafuneka zithunyelwe.
"Simema onke amazwe ukuba ashenxise izithintelo zokuthumela ngaphandle kunye nayo nayiphi na eminye imiqobo kurhwebo kwizitofu zokugonya ze-COVID-19 kunye negalelo elibandakanyekayo kwimveliso yazo", yaqhubeka ingxelo.
Impilo yehlabathi 'isemngciphekweni'
Ngaxeshanye, iiarhente ze-UN ziqinisa umsebenzi wazo nge-COVAX kunye ne-AVAT yokujongana nokuhanjiswa okugonya ngokugonya, ukuvelisa kunye nemicimbi yorhwebo, ngakumbi e-Afrika.
Bahlanganisa izibonelelo kunye nemali exhasayo ukuxhasa lo msebenzi.
“Siza kuphinda siqwalasele iindlela zokuxhasa ngezimali iimfuno zokugonya zexa elizayo njengoko kuceliwe yi-AVAT… [kunye] nokukhuthaza uqikelelo lonikezelo olungcono kunye notyalo-mali ukwandisa ukulungela ilizwe kunye namandla okuchasa”, baqinisekisa.
Iintloko zearhente ye-UN iqinisekisile ukuba ziya kuqhubeka nokwenza ngcono idatha, zichonge izikhewu kwaye ziphucule ukubonakala ekuboneleleni nasekusetyenzisweni kwazo zonke izixhobo ze-COVID-19.
“Ixesha lokuthatha amanyathelo ngoku. Ikhosi yalo bhubhani - kunye nempilo yehlabathi - zisemngciphekweni ”, sitsho ingxelo.
Usihlalo wezoKhenketho e-Afrika u-Cuthbert Ncube uthe:
“Ukhenketho lwase-Afrika aluzukusebenza naye wonke umntu kwimithombo yethu yentengiso kunye nezo zifumanayo ezinofikelelo kwizitofu zokugonya. I-Afrika ikwimeko emaxongo. Onke amacandelo achaphazelekayo, ngakumbi ukhenketho kufuneka lube kwitafile enye xa kuxoxwa ngezicwangciso zokuhambisa isitofu. ”
UJuergen Steinmetz, usihlalo we Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi wongezwa:
Kuyaphazamisa ukungaboni i-UNWTO ukuba ingabi yinxalenye yale ncoko. Icandelo lethu lifuna ukumelwa ngokungxamisekileyo kuwo onke amanqanaba. Isitofu sokugonya sisiseko esitsha salo naluphi na ukhenketho olusebenzayo. I-WTN ime ilungele ukugcwalisa esi sithuba kwaye ithethele abo bangenako okanye abangenako. ”